फेरि भूकम्प - परिहास - नेपाल
भविष्यवक्ता अर्जुन क्षत्रीले गरेको भविष्यवाणीलाई वास्तवमा झूट भन्न मिल्दैन । उनले भूकम्प आउँछ भनेका थिए । अब कुनै अमूक हाकिम सा’बले भूकम्प आएको चाल पाएनन् भन्दैमा भूकम्पै आएको छैन त भन्न मिलेन नि । यो पनि त्यस्तै हो । किनभने भविष्यवक्ता अर्जुनले आउँछ भनेको भूकम्प वास्तवमा नआएकै चाहिँ होइन, राम्रै गरी आएको थियो । र, आएर मजाले गएको पनि थियो ।
अर्जुनले भनेको भूकम्प वास्तवमा गत साता काठमाडौँ नै केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको थियो । खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवास छेउछाउ त्यसको इपिसेन्टर थियो । भूकम्प आकारमा पनि अलि ठूलै थियो । त्यसको परकम्प दिल्लीसम्म पुगेको थियो । नेपालमा ठूलो भूकम्प आउँदा देशका प्रधानमन्त्रीहरु सधैँ बाहिरै हुने हाम्रो पुरानो सन्जोग हो । ०९० को भूकम्प आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर बर्दियामा थिए । ०७२ को भूकम्प आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इन्डोनेसियामा थिए । अस्ति भूकम्प आउँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली दिल्लीमा थिए । दिल्लीमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वार्ता हुनै लागेको थियो, अचानक प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी हल्लिएको देखियो । मोदीले सोधिहाले, “के भयो ओलीजी ?”ओलीले भने, “नेपालमा ठूलै भूकम्प गएजस्तो लाग्छ । त्यसको परकम्प यहाँसम्म आइरहेको छ ।” मोदीले हडबडाउँदै भने, “हो र ? उसो भए एअरफोर्स तयार गरुँ ?”
ओली छक्क परे, “एअरफोर्स ? किन ?”“तपाईंको उद्धार गर्न,” मोदीले भने, “यस्तो अवस्थामा तपाईंको उद्धार गर्नु हाम्रो कर्तव्य होइन र ?”
भूकम्प यसरी गएको थियो । त्यसले सबैभन्दा बढी त बालुवाटार र सिंहदरबारलाई हल्लाइदिएको थियो । यसको परकम्प अझै रोकिएको छैन । यति ठूलो भूकम्प गइसक्यो । तर कुन आधारमा ज्योतिषलाई पक्राउ गरेको ?